Ogaden News Agency (ONA) – Magaalada Birqodiyo Dhuxun oo dad lagu xidhay iyo dilal, Boob iyo xidhay ka dhacay bishan dhulka Ogadeniya.
Magaalada Birqodiyo Dhuxun oo dad lagu xidhay iyo dilal, Boob iyo xidhay ka dhacay bishan dhulka Ogadeniya.
Waxaa jira dhibaatooyin kala duwan oo uu cadawgu soo gaadhsiiyay shacabka Somalida Ogaadenya kuwaas oo isugu jira dil, dhac, xidhay, iyo jidhdiil. Sidaad wararkii hore ku hesheen waxaa magaalada Gunagado iyo nawaaxigeeda Ciidamada gumeysigu ka geysteen Xasuuq iyo Baro kicin. Dhacdadan ayaa ah mid guud ahaanba dhulka Ogadeniya si qorsheysan bishaan Febraayo uga socotay.
Amarkan oo ah amar ay Saraakisha TPLF ay kusoo amreen in xasuuq qorsheysan lagageysto dhulka Ogadeniya. Waxaana soo gaadhay sidaan horey idiinku sheegnay Magaalada Jigjiga Saraakiil kasocota Ciidamada TPLF iyo Wasiirada TPLF oo qiimeyn ku sameeyay Xasuuqa ay geysteen ciidamada Woyanaha ah iyo Liyuu Poliska Labadii Bilood ee ugu danbeeyay. Waxa ayna u jeedadoodu tahay inay helaan dad somali ah oo ay qoorta u galiyaan danbiyada ay Woyanahu ka geystaan Ogadeniya- haddii ay dhacdo in la horkeeno maxkamada Hague.
Ujeedada kale ee bishan Febraayo xasuuqa u geysanayaan ayaa iyana lagu sheegay inay Bishan Febraayo aheyd bil ay Ummada Somalida Ogadeniya Qiimeyn kusameyso Halganka ay hormuudka u tahay JWXO oo bishii Febraayo 1994 xasuuq balaadhan ay ciidamada Tigreegu ka geysteen dhulka Ogadeniya. Ciidamada Woyanaha ayaa dilalka badan iyo xasuuq ka geysta sanadkasta bisha Febraayo iyaga oo iskudayay in shacabka iska horkeenaan.
Dhuxun Iyo Birqod
Ciidamada gumeysiga ah ee Ethiopia ayaa xidhay, dhac iyo dil badan ka geystay bishan Febraayo Gudaha Ogadeniya. Waxaana maalmihii ugu danbeeyay lagu xidhay Magaalada Birqod iyo Dhuxun dad ay naga soo gaadheen magacyada kala ah:
Shafeec xasan nuur oo lagu xidhay Birqod,
Iyo degmada dhuxun oo lagu xidhay
Tamaan cabdi-wali aadan
Wararkan wixii ka soo kordha dib ayaan ka soo sheegaynaa
Boob, XIdhay Iyo Dilal dhacay Febraayo
4/2/12 waxaa magaalada sagag lagu xidhay
Junaydh axmed cali
16/1/12/ waxaa magaalada Birqod xadhi iyo dhac wada socda loogu gaystay gabdhaha kala ah
Xaliimo nuur cali dhac iyo xadhig 6000 bir
Bishaaro cabdulaahi xadhig iyo dhac 4000 bir
6/2/12 waxaa magaalada Qabridahar jidh dil iyo xadhig loogu gaystay dadka kala ah
Khadra cabdi naasir magan
Bishaaro sheeklh yuusuf ismaaciil
Sidoo kale waxaa isla taaiikhdaa dhac loogu gaysatay Tukaale oo ka tirsan Fiiq
Camanje daahir guhaad oo laga dhacay 18 neef Adhi ah
5/2/12 waxaa magaalada sagag lagu dilay
Cabdi wahaab ismaaciil cumar askar